Kedụ ka ndị mgbasa ozi si agba mbọ na Mad Madness? | Martech Zone
Wenezdee, Machị 16, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na 2015, e nwere 11.3 nde nkezi ngụkọta ndị na-ekiri nke NCAA's March Madness, tinyere ndekọ 80.7 nde ndụ video iyi ndị na-ekiri. Egwuregwu ndị a kacha ele anya dọtara 28.3 nde ngụkọta ndị kiriri. Ọ bụrụ n’icheghị na ọ bụ nnukwu ihe, ịkwesịrị ịnwale ịrụ ọrụ n’obodo Indianapolis n’ọnwa a (ebe ọfịs anyị dị)! Anyị ga-arụ ọrụ n'ụlọ ọtụtụ ọnwa.
a ozi sitere na Koeppel Direct na-egosiputa uzo di iche iche di iche iche na ndi ahia gha agha iru ndi egwuregwu obe-ngwaọrụ mgbasa ozi n'oge March Madness.
Afọ gara aga March Madness stats na-atụ egwu - ụdị 126 jiri $ 1.163 ijeri na 30 nke abụọ telivishọn tụrụ na nkezi $ 1.55 nde ọ bụla n'oge March Madness. Ma nke ahụ bụ nanị ọnụ mmiri iceberg. Oge ahia ahia nke Madness bụ ohere buru ibu maka mgbasa ozi ngwaọrụ, yana atụmatụ ị nweta ihe ngosi nke afọ a ga-enweta ihe ndị ọzọ na telivishọn.
Digital ad emefu na March Madness bụ $ 30.4 ijeri na smartphones na mbadamba na ga-eti na ndekọ na afọ a. Ọzọ $ 27.6 ijeri nọrọ na desktọọpụ na laptọọpụ mgbasa ozi n'oge 17.8 nde awa nke vidiyo gụgharia.
Ka ihu nke abụọ na nke atọ na-ewu ewu, ndị mgbasa ozi na-arụ ọrụ iji nweta uru nke ihe eji agagharị na telivishọn, desktọọpụ, mbadamba na smartphone. Ọ dị ịmata onye ọzọ na-ezube ịchụ ego, ebe ha na-eme atụmatụ iji ego dollar ndị ahụ, na ego ole? Lekwa ya…
Tags: march aragaa ara nzuzu emefuMaachi nzuzunaaahia egwuregwu